– धरानको चुनावी माहौललाई कसरी नियाली रहनु भएको छ ?
समग्रतामा धरानेको चुनावी माहौल सूर्यको पक्षमा देखिएको छ । हामी अलिकति उम्मेदवार निर्णय गर्न ढिला भयौं । तथापि अहिले चुनावी अभियान द्रुत गतिमा बढेको छ । विगतको मतभन्दा राम्रो मार्जिनले लिड गर्दैैछौं । यो निर्वाचनमा सवै सेक्टर परिचालित छन् । महिला, बुद्धिजीवी, जेष्ठ नागरिक, व्यापारी व्यवसायी परिचालित छन्, उत्साहित छन् । विजय सुनिश्चित छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ, यो माहौलले ।
– नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राईले धरानमा जित्ने आधार के होला ?
जित्नुपर्ने आधार अनेक छन् । पहिलो, धरानको विकास निर्माणमा आजको धरान बनाउन कम्युनिष्ष्ट पार्टीको महत्वपुर्ण योगदान छ । पाँच वर्षको लागि धरानेबाट पाँच वर्षको म्याण्डेट लिएका थियौं । तर, बीचमा तारा सुब्बाको निधन भयो । २० वार्ड मध्ये १५ वटा राम्रो मतले विजय हासिल गरेका थियौं । तात्कालीन एमाले मात्र थियो त्यसबेला । अहिले एकीकृत भएर नेकपा भएकाले दुवैको मत एकै ठाउँ खस्ने भएकाले १३ हजार बेसी भोटले हिजै नै लिड गरेको थियो । आज गुणात्मक भोटले आशा उमङ्ग ल्याएको छ । अझै धेरै मार्जिनले जित्छौं । मार्जिन बढाउनेमा क्रियाशील छौं ।
– धरानलाई बामपन्थीको पुरानो विरासत क्ष्ँेत्र मानिन्छ तर विपक्षीले भत्काउने दाबी गरेको छ नि ?
निर्वाचनको बेला दाबी गर्नु स्वाभाविक हो । युद्ध लड्न जाने सिपाहीले म हार्छु भन्दैन । विपक्षीले भत्काउन सक्दैन । कम्युनिष्टले निर्वाचन जित्ने कुरा भनेको समाजको निरन्तर प्रगतिशील परिवर्तनसँग जोडिएको विषय हो । एकजना कुनै व्यक्तिलाई मेयर वा उपमेयर बनाउनका लागि चुनाव लडिरहेका हुँदैनौ । मूलतः कम्युनिष्टकै निर्णायक भूमिकाले सामन्तवादी निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सफल भएका छौं । हामी यसैमा मात्र चित्त बुझाउने पक्षमा छैनौ । यसलाई उच्च स्तरको लोकतन्त्र, उच्चस्तरको सामाजिक न्यायसहितको समाज व्यवस्थामा जान वा लान चाहन्छौं । स्वाभाविक रूपमा प्रगतिशील रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ । त्यसैले राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन संरक्षण गर्ने पार्टी लोकतान्त्रिक हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अग्रणी भूमिका खेल्ने पार्टी, जनजीवविकाका सवाललाई अग्रणी सम्बोधन गर्दै आएको पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नै भएकाले यो पार्टीलाई धरानमात्र होइन मुलुकबाटै विस्थापित गर्ने विपक्षीको कुरा हास्यास्पद मात्र हो ।
– नेकपाका प्रत्याशी प्रकाश राईलाई नै मतदाताले भोट दिनुपर्ने किन ?
पहिलो कुरा, तारा सुब्बाको सपना प्रकाश राईले नै पुरा गर्ने हुन् । अन्य पार्टी र अन्य व्यक्तिले पूरा गर्न सक्दैनन् । यसको निरन्तरता भनेको प्रकाश राई नै हो । दोस्रो कुरा, धरानलाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, धरानलाई प्रदेशकै केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, स्वच्छ हराभरा र रमणीय सुनदर शहरको रूपमा विकास गर्ने, धराने जनताको सबै सेक्टरमा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने, स्पष्ट नीति योजना र कार्यक्रम भएको पार्टी नेकपा भएकाले प्रकाश राईलाई भोट दिनुपर्छ । तेस्रो, अहिले हामी सामन्तवादलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । यसलाई विकासित गरेर वैज्ञानिक समाजवादमा जान चाहन्छौँ । समृद्ध समाज र सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो ध्येय पनि यसैसँग जोडिएको छ । अरू दलहरू यथास्थितिमा रम्न चाहन्छन् र स्वच्छन्द पुँजीको विकास मात्र गर्न चाहन्छन् । हामी राष्ट्रिय पुजीकाृे विकास गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौं । यो निर्वाचन त्यो अभियानसँग पनि जिोडिएको छ । त्यसैले धराने जनताले नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राईलाई नै मत दिनुपर्छ भनेर हामी अनुरोध गर्दै आएका छौँ ।
– विपक्षीले त नेकपाले धरानमा केही गर्न सकेन भनेर आरोप लगाइरहेको छ नि ?
विपक्षीको यो अरोपमा कुनै दम छैन, आधार छैन । किनभने, आजको धरान कम्युनिष्टले निमाण गरेको धरान हो । यो धरानबाट काङ्ग्रेस सत्तामै रहँदा यहाँका दर्जनबढी सरकारी कार्यालय सारिए । ब्रिटिसले क्याम्प उठाएपछि धराने जनताले आन्दोलन गरे । यसलाई थामथुम गर्नमात्र बीपि प्रतिष्ठान आएको हो । पुनरावेदन अदालत काङ्ग्रेसकै प्रयासमा धरानबाट विराटनगर सारियो । कुनै समय कोशी अञ्चलको सदरमुकाम धरान थियो, त्यसबेलादेखि हालसम्ममा धरानमा रहेका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई धनकुटा, राष्ट्रिय बाणीज्य बैङ्कको क्षेत्रीय कार्यालयलाई विराटनगर, धरान–१६ मा प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन हुने मेडिकल कलेजलाई महाराजगञ्ज काठमाडौं, नापतौल तथा गुण नियन्त्रण विभागको क्षेत्रीय कार्यालयलाई विराटनगर, क्षेत्रीय अस्पताललाई विराटनगर, अञ्चल अदालतलाई ०४६ सालपछि पुनरावेदन अदालत नामाकरण गर्नासाथ विराटनगर रातारात सारियो । यहाँबाट पोखरा सारिएका ब्रिटिस घोपा क्याम्प, विराटनगर सारिएको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसको आधारमा खाद्य प्रयोगशालाको क्षेत्रीय कार्यालयलाई अन्यत्र सारिए
। यातायातको लाइसेन्स वितरण कार्यालय पनि सारियो । विकास बैङ्कको क्षेत्रीय कार्यालयलाई विराटनगर सारियो । यी सबै कार्यालयहरू पहिले पञ्चसँग मिलेर र पछि काङ्ग्रेसले एक्लै रातारात सारेर धरानलाई रित्तो बनाउने प्रयत्न कसले ग¥यो ? कसको सत्ता हुँदा ती कार्यायहरू धरानबाट अन्यत्र सारिए ? धराने जनताले बुझेका छन् । अहिले नेकपाले प्रदेश १ को पर्यटन कार्यालयसँग सम्बन्धित कार्यालय धरानमै राख्दै छ । वन विभागको निर्देशनालय धरानमा स्थापना गरिसकेको छ । नेकपाका केन्द्रीय नेता दलबहादुर राना भूमिसुधार मन्त्री भएको बेला धरानमै मालपोत कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कम्युनिष्टकै नेतृत्वकालमा इलाका प्रशासन कार्यालय धरानमा स्थापना गरिको छ । यी तत्थ्यहरू आफै बोलिरहेका छन् कि काङ्ग्रेसले कति झुट बोलिरहेको छ भनेर । धरानलाई हामी पर्यटन स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदको केन्द्र बनाउन चाहन्छौँ । त्यसैसँग सम्बन्धित भएर कामहरू भइरहेका छन् । जोगवनी किमाथान्का सडक धरान भएर जाँदै छ । मदन भण्डारी राजमार्ग झापाको बाहुनडाँगीबाट धरान हुँदै पश्चिम महाकालीसम्म पुग्ने राजमार्ग हाम्रो नेतृत्वमा निर्माण हुँदै छ । यीमाथिको तथ्यले काङ्ग्रेसको आरोप मिथ्या मात्र हो ।
– नेकपाले धरानमा विकास निर्माण गर्न बाँकी के–के छन् ?
धरानलाई शिक्षा स्वास्थ्य खेलकुद र पर्यटनको हबको रूपमा स्थापित सुन्दर शहर बनाउनु नेकपाको मुख्य उद्देश्य हो । यसलाई मानवीय सूचकाङ्कमा नमूना शहरको रूपमा विकास गर्न चाहन्छ नेकपा । रोजगारी, खेलकुद, संस्कृतिक शहरको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं । धरान २० को दशकदेखि तात्कालीन पूर्वाञ्चलको गेटवे हो । सम्भावना त्यसमा निहित छ । यो बहुजातीय बहुसांस्कृतिले युक्त धरान हो । धरानमा हिमाली, पहाडे, र तराईका मिश्रित र विविधता संस्कृति पाइने भएकाले सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको रूपमा सिङ्गो धरानलाई विकास गर्न चाहन्छौं । जीवनमा उपयोगी शिक्षाको हवको रूपमा पनि धरानलाई विकास गर्दैै जानेछौँ । शिक्षा नीतिमा पनि परिवर्तन भएका छन् । विद्यालय शिक्षाबाटै जीवनोपयोगी शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै छौं । वन विज्ञान, जडिबुटी सम्बन्धी शिक्षा दिनका लागि पनि यहाँ केन्द्र स्थापना गर्ने पहल गरिरहेका छौं ।
– विकास निर्माणमा धराने जनसहभागिताको मोडललाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ ?
तात्कालीन एमाले हुँदा म जिल्लाको सचिव भएको बेला ६०/४० को नीति बनाएर जनसहभागिताको अभियान चल्यो । त्यही अभियान आज पनि चलिरहेको छ । आज साथीहरूले सडकमा खाल्टाखुल्टीको बारेमा कुरा उठाउँछन् । यसको दिगो विकास र सुन्दरतालाई निरन्तरता दिन सबै सेक्टरमा पुर्याउन चाहन्छौं । हामीले ०४७ को परिवर्तपछि ०४८मा आम चुनाव भयो । त्यस आमचुनावदेखि ६२/७३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिसम्मको २९ वर्षको अवधिमा करिब २४ वर्षसम्म काङ्ग्रेसले देशमा शासन गरेको छ । हामीले त्यो अवधिमा मुस्किलले साढे तीन वर्ष शासन गरेका छौं । त्यतिबेला तात्कालीन स्थानीय निकायलाई बजेट दिने कुरामा कन्जुस्यार्इं गर्यो ।
०५१ सालमा हामीले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिने अल्पमतको सरकार बनायौं । त्यो सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं नीति रर कार्यक्रम तय गरी स्थानीय निकायलाई सिधै विनियोजन गरेर दिने अनुदान र अधिकार दिने नीति बनायौँ । त्यसैलाई एालेको नौमहिने सरकारले लागू गर्यो । त्यतिबेला काङ्ग्रेसले कनिका छरे जस्तो बजेट बाँड्यो भनेर आरोप लगायो । आफूले नेतृत्व गर्दा ती बजेट पनि बढाउनुपर्ने थियो तर बढाएन । त्यसैले धरानले कहिलै पर्याप्त बजेट पाउन सकेन । धरानले बजेट पाउन नेकपाको सरकार पर्खिनुपर्यो । विगत दुई वर्ष यतादेखि धरानले पर्याप्त बजेट पाइरहेको छ । अव अझै बढी पाउँदै जानेछ । धरानका मुख्य योजनाहरूमा नेकपा सरकारले नै चासो दिएर विगत दुई वर्षयतादेखि अर्बौ बजेट दिने क्रम जारी राखेको छ । धरानमा खेलग्राम, स्मार्ट बसपार्क, खानेपानी, सेउती र सर्दु करिडोर निर्माण, सुकुम्बासीलाई घर नम्बर प्रदान गर्ने जस्ता योजनाहरू धमाधम नेकपा सरकारले नै गर्दै आएको छ । यी तथ्यले के भन्छन् भने २६ वर्षसम्म काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा धरानलाई उजाड बनाउने कामबाहेक केही भएन । कम्युनिष्टले धरानमा केही गरेन भन्नु झुटको सहारामा चुनाव जित्ने दिवास्वप्नमात्र हो काङ्ग्रेसको ।